2009 July | MoeMaKa Burmese News & Media
>Win Tin and activists show support for Aung San Suu Kyi
> ဦးဝင်းတင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံသူများ ထောင်ရှေ့သို့သွားဓာတ်ပုံသတင်းဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း စီရင်ချက်ချမည့် သတင်းကြောင့် ထောင်ရှေ့သို့ ရောက်လာသော ဦးဝင်းတင် နှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတချို့ကို ယနေ့...
>Chit Thu Wai in maxi dress
> ကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် မော်ဒယ် ဓာတ်ပုံသတင်းဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ကြော်ငြာတခုတွင် ကိုယ်ဝန်သည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသော မိုဒယ် ချစ်သုဝေ။ လာမည့် ၁၀ ရက်နေ့သည် ချစ်သုဝေ၏ ၂၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့...
>Before July 31, Numerous Burmese Activists detained by Burmese secret police
> ဇူလိုင် ၃၁ – တရားရုံးချိန်းမတိုင်မီ အဖမ်းခံရသူ ၂၃ ဦး စာရင်းရသည့်အနက်မှ ၂ ဦး ပြန်လွတ်လာဟု ဆို မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၉ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ပြည်တွင်းက...
>Than Soe Hlaing – July 31st or …
> ဇူလိုင် ၃၁ သို့မဟုတ် …သန်းစိုးလှိုင်ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ နံနက် ၈နာရီ ခွဲ ရန်ကုန်၏ နံနက်ခင်းမှာ ပုံမှန်နေ့ တနေ့ဟု ထင်ရသော်လည်း အချို့သူများကတော့ ယနေ့ကို တစုံတရာ ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်...
>Trial on DASSK postponed again to 11th August
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားရုံးချိန်း သြဂုတ်လ ၁၁ သို့ ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း အေပီသတင်းဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ တရားရုံးက ၀န်ထမ်းတဦး၏ အဆိုအရ ဒေါ်စုရုံးချိန်းကို သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။...
>SPDC loves to point the finger
> ရေကြည်နောက်သတဲ့ … မေစုရေမိုးသော်သိန်းဇူလိုင် ၃၁၊ ၂ဝဝ၉ ဝံပုလွေက အပြစ်မဲ့သူ သိုးငယ်ကို ရေကြည်နှောက်သည်ဟု အပြစ်ရှာသည်။ သိုး ငယ် ကပြန်၍ ပြောသည်။ ‘ရေကြည်နှောက်ဖို့ နေနေသာသာ- ရေထဲသို့ပင် မဆင်းရသေး’...
>Aung Way – 31st July
> 31st JULYBlack FridayOrBloody Friday. Let’s strike. It must be” Fightday”.Aung Way (July 30th 2009)
>Regime cracking down illegal lottery
> နှစ်လုံးထီ လောင်းကစား ဖမ်းဆီးနေ မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉ လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ကြီးများဖြစ်သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင် တရားမ၀င် ၂လုံး၊...
>Cartoon Maung Yit – The End of Burmese Justice System
> ကာတွန်း မောင်ရစ် – မြန်မာပြည်ဥပဒေကြောင်း၏ အဆုံးဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉Cartoon Maung Yit – The End of Burmese Justice System
>baby born in the bus
> ကိုယ်ဝန်သည် တဦး ဘတ်စ်ကားစီးနေစဉ် ကလေးမွေးဓာတ်ပုံသတင်းဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ရန်ကုန်မြို့မှ ကိုယ်ဝန်သည် တဦးသည် ဘတ်စ်ကားစီးနေစဉ် ကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ လမ်းနီ မှတ်တိုင်အနီးသို့ ရောက်စဉ် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု...
>Moemaka Quotes for July 2009
> မိုးမခရဲ့ ဇူလိုင်လ စာကိုး၊ စကားကိုးဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ “ဆံပင်ရှည်များကို တရုတ်ပြည် ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရန် စတင် ၀ယ်ယူခဲ့စဉ်က (တပိဿာလျှင်) ငွေကျပ် တစ်သိန်းစွန်းစွန်းသာ ပေါက်ဈေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ...
>YMND’s second poem
> အိမ်ကွင်းများရိုင်းမြနဒီဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ကွင်းထဲ ပို့ထားခံရတာတောင်ကွင်းကို ကွင်းမှန်းမသိအိမ်ကို အိမ်မှန်းမသိနိုင်ကြတော့ဝစီလေး တရွှိရွှိ နဲ့ဒိုင်တွေက ၀ါးရင်းတုတ်ကိုင် စောင့်နေတာကြောက်စရာအားကစားဝတ်စုံ တကားကားမှ အားမနာဘောကောက်ပဲ လုပ်ချင်တဲ့လူကလည်း မရှားဘောလုံးပွက်ရာ ခြေရာချရွာပွဲဒီဇိုင်း ၀ိုင်းလိုက်နေကြပုံပရိသတ်ကြီးလည်း ငါ့ဝမ်းပူစာ...
>Mee Doke – Letter to distance call – Poem
> အဝေးက ဥသြတွေနှင့် မိတ်ဆွေတို့အတွက် ငရဲကလူ ပေးစာမီးဒုတ် ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောတယ် …အဝေးက ဥသြတွေ တွန်သံ ပေးရုံလောက်နဲ့ဒီက ပိတောက်တွေ မပွင့်နိုင်ဘူး။ငါတို့ ယုံကြည်တယ်...
>Burmese in NYC to protest for DASSK Freedom showing their solidarity
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နယူးယောက်ကမြန်မာတို့ ဆန္ဒပြမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ လာမည့်သောကြာတွင် တရားရုံးက စီရင်ချက်ချမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို မတရားကြောင်း၊ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြပွဲကို နယူးယောက်ရှိ မြန်မာ စစ်မစ်ရှင်ရုံးရှေ့တွင်...
>NLD confirmed 31st July be the verdict day for DASSK’s trial
> အင်န်အယ်ဒီ ကြေညာချက် ၂၁။၀၇။၀၉ – ဇူလိုင် ၃၁၊ နံနက် ၁၀ နာရီ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထား မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ယနေ့လက်ခံရရှိသော အင်န်အယ်ဒီကြေညာချက် ၂၁...
>8888 – 21 Years – Memorial Postcard
> ၈ လေးလုံး ၂၁ နှစ် – အမှတ်တရ ပို့စကဒ် ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၉
>Burmese said, Frailed Government replacing frailed Currency Notes
> အစိုးရအစုတ်က ငွေစက္ကူအစုတ်သာ လဲပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုနေကြယုယုခင်၊ ရန်ကုန်ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၉ ပြည်သူများ လက်ဝယ်တွင် အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ သုံးဆွဲနေရသော ငွေစက္ကူဟောင်းများကို တစ်ဦးလျှင် ၁၀ ရွက် နှုန်းဖြင့် သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့မှ...
>MoeMaKa Reader from Rangoon – Common Sense Prediction on DASSK trial
> ထောင်တန်တဲ့ စကား၊ ရယ် … ပေါ့ မိုးမခစာဖတ်သူတဦး (ရန်ကုန်) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၉ အခု ရန်ကုန်က ပရိသတ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုစီရင်မှုကို အတော်ကို အဆိုးမြင်နေကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရက အစွမ်းကုန်...
>Cartoon Beruma – Than Shwe needs only six feet under
> ကာတွန်းဘီရုမာ – သန်းရွှေအတွက် ၆ ပေ ၄ ပေ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၀၉ Cartoon Beruma – Than Shwe needs only six...
>Part of Aung San Suu Kyi’s residence’s plot sold, according to public notice from Regime’s newspaper
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခြံဝင်းကို ခွဲစိတ်ရောင်းချပြီးဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာထည့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၀၉ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း (အမှတ် ၄၀ အေ၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၂...